Kuya kufuneka ucime le app ye-android ithandwayo ngaphambi kokuba ibambe imali yakho
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Kuya kufuneka ucime le app idumileyo ye-Android ngaphambi kokuba ibambe imali yakho
Kuya kufuneka ucime le app idumileyo ye-Android ngaphambi kokuba ibambe imali yakho
Njengokwanelisa njengoko kuhlala kukhangela kuGoogle & Apos; Ivenkile yeVenkile ukhangela ii -apps ezintsha ezonwabisayo, imidlalo enomdla, okanye izixhobo ezincinanana zokufaka kwifowuni yakho ye-Android kwaye uninzi lwamaxesha asetyenziselwa simahla, kuya kufuneka ulumke kuninzi iingozi ezinokulandela inyathelo lakho ngalinye.
Abathethi nto intle ebomini ihlala ikhululekile, kwaye nangona uhlala unyamezele intengiso maxa wambi ukuze uvunyelwe ukusebenzisa izinto ekuthiwa zii 'freemium' zokusebenza kunye neenkonzo, ixabiso ngamanye amaxesha ekufuneka uhlawule ngalo (uhlala ungazi. ) idlula kude intlawulo yexesha elinye, yithi, $ 9.99 okanye umrhumo wenyanga we- $ 2.99 okanye njalo.
Ngelixa & nathi siqhelene nokuva malunga Uninzi lweeapps ezintsha ezinobungozi ezizama ukukubaleka okanye bhombela into yakho ephathwayo kunye neentengiso kube kanye kwiiveki ezimbalwa , oku kufumanisa kutsha nje akuqhelekanga.
I-app enye, i-100 yezigidi + ukhuphelo, izigidi ezingama-20 + zokurhanelana okukrokrisayo
Kulungile & apos; ilungile, ingxelo entsha epapashwe liqonga lokhuseleko lweselfowuni i-Secure-D ivuliwe umnini Upstream & apos; s iwebhusayithi esemthethweni ijolise ngokupheleleyo kusetyenziso olunye lwe-Android. Ayivakali iyingozi, ngoku, andibi kunjalo? Ngamagama angaphezu kwezigidi ezi-3 ezifumanekayo kuGoogle Play ukusukela ngoSeptemba, ziziphi iingxaki onokuthi uve malunga nale app?
Ewe, ukuba u & ampos; uyile ekudalweni kwevidiyo ephathekayo kunye nokuhlela kwaye ungathandi ukuhlawulela izixhobo zakho, kukho iiapos ithuba elifanelekileyo lokuba ungadibani nazo IVivaVideo kukhangelo lwakho lweyona app ilungileyo ukukunceda ngokusika, ukunciphisa, ukunqumamisa, kunye nokudibanisa umxholo wevidiyo, kunye nokongeza isicatshulwa, izitikha, umculo, njalo njalo.
Kungenxa yokuba le app ifakiwe ngaphezulu kwesigidi sezigidi amaxesha kwihlabathi liphela, ukuqokelela ngaphezulu kwe-12 yezigidi zomlinganiso kumanqaku aphakathi kwe-4.4. Ezo & apos ... azimbi kwaphela, kodwa endaweni yokubonisa ukuthembeka kweVivaVideo & apos, oko kuphakamisa ukuba abaphuhlisi bayo banesakhono esimangalisayo sokufihla usetyenziso kunye nokuziphatha okukhohlisayo.
Emva kwayo yonke loo nto, uhlalutyo lwekhowudi aluxoki, kwaye uKhuselekile-D uqokelele ubungqina obaneleyo ukusukela kwangoko nge-2019 (!!!) ukungqina ukuba iVivaVideo ihlala iqala ngemizamo yokubhalisa yeprimiyamu engagunyaziswanga ngelixa ihambisa 'iintengiso ezingabonakaliyo kubasebenzisi.' Ngamanye amagama, iapp ijonge ukuvelisa ingeniso engekho mthethweni ngeendlela ezimbini, okokuqala ngokukurhuma kwiinkonzo ezingezizo ngaphandle kolwazi lwakho kwaye okwesibini ngokukhohlisa abathengisi ukuba bahlawule iikhomishini zokucofa ubuxoki.
I-Secure-D & apos; s algorithms ngokuphumelelayo ikwazile ukufumana kunye nokuvimba ngaphezulu kwe-20 yezigidi kunye neapos; ukurhanelwa kwintengiselwano yeselfowuni 'enxulunyaniswe neVivaVideo ngeli xesha lide likhankanyiweyo, ukugcina abasebenzisi inani elipheleleyo leedola ezingama-27 ezigidi okanye njalo. Ngelishwa, ezinye iintlawulo ezininzi zinokugqitha ngaphandle kokuqaphela mntu, ke kuya kufuneka ujonge imbali yakho yezemali ukuba ukhe wayisebenzisa le app.
Ngaba kufuneka uyicime le app okanye uyihlaziye kuhlobo lwamva nje?
Impendulo yalo mbuzo ngokucacileyo ixhomekeke ekubeni ukhathalele kangakanani ukusebenza kweVivaVideo & apos; nendlela othanda ngayo ukungcakaza. Ngokwentloko ekhuselekileyo ye-D uGeoffrey Cleaves ( ngeForbes ), Ngelixa iinguqulelo ezindala zeapps zisaziwa njengobuqhophololo, iqela lakhe & apos; uphando alufikanga kwisigqibo esifanayo ngokubhekisele 'kwintsha' ... okwangoku.
Oko kunokuthetha ukuba ii-shenanigans ziyeke ukulunga okanye ii-app & apos; ii-devs zisenokuba zifumene iindlela ezintsha nezingcono zokufihla iinjongo zabo zokwenyani. Ngendlela, ukuba awunakuzibuza ukuba kutheni thina singazi malunga nokuziphatha okungathandekiyo ngoku, ngenxa yokuba iVivaVideo ibonakala ngathi yenzelwe ngokukodwa ukumisa imisebenzi yayo engekho mthethweni xa ibekwe iliso.
Ngaphezulu kwayo yonke into, iapps ifuna iqela lemvume yomsebenzisi engeyomfuneko, ekufuneka ibe sisizathu esaneleyo kubantu abaninzi ukunqanda ukuyifaka kwasekuqaleni.
Njengesiqhelo, iinzame zikaGoogle kunye neepos; zokugcina iVenkile yokudlala indawo ecocekileyo nekhuselekileyo iyasilela, ke ukuba awuthandi ukuqengqa idayisi kwaye ubeke emngciphekweni wokuphulukana nemali ngenxa yesixhobo sokuhlela simahla sokwenza ividiyo, ingcebiso yethu Cima iVivaVideo ngokukhawuleza. Yile & apos; into elungileyo ukuyenza kwezi meko, nokuba zithandwa kangakanani ii -apps eziyingozi.
isamsung galaxy buds ulawulo lwevolumu
Ungayingenisa njani idatha yeFom ngesiCelo sePosti esiQINISEKILEYO
Nantsi iapos; ungayifumana njani i-Samsung Galaxy Qaphela 10 + 5G ngesaphulelo esikhulu se- $ 850
Njani kwaye kutheni ukukhubaza ukutshaja ngokukhawuleza kwifowuni yakho
Yenza isandi sakho se-Samsung Galaxy S4 ngcono usebenzisa iAdapt Sound
Ngaba i-inshurensi yomnxeba ifanelekile? Izinketho zesithwali vs AppleCare vs Samsung Protection vs SquareTrade
Ukuvuza okukhulu kwe-Samsung Galaxy Watch Active 4 kutyhila uyilo olucekeceke kunye nemibala